Në la dhiso xiriir waa u baahan yahay kalsooni, taasina waa mid aad u xoogan oo midba midka ka mid ah labada dhinacba ay u badan tahay inaysan lahaan doonin. Ku kalsoonow internetka waa mid ka ka mes ah muhiimada ugu muhiimsan, gaar ahaan haddii xiriirkaasi yahay mid ganacsi; halkaasoo lacag laga helo. Xitaa ka qoto dheer taasi waa xaqiiqda ah Xogta waa dahab cusub, sidaa darteed wax walba oo aan ku Sameyno shabakaduhu waxay u baahan yihiin badbaado.
1 Maxay tahay Laydhka Laydhka (Shtresa e sigurt e Sockets) (SSL)?
3.5 Përcaktimi i Dejinta 301
Maxay tahay Laydhka Laydhka (Shtresa e sigurt e Sockets) (SSL)?
SSL waa nidaam amaan ah oo hubinaya isticmaalaha in xiriirka ka dhexeeya kombuyuutarkooda iyo goobta ay booqanayaan ay tahay ammaan. Inta lagu jiro ISKU xirka, macluumaad badan Ayaa KA dhaxeeya laba kombuyuutar, oo ay ku jiraan waxa laga yaabo inay noqon Karaan xog qarsoodi ah sida lambarrada kaararka deynta, lambarrada aqoonsiga isticmaalaha ama xitaa ereyada sirta ah.
Xaaladaha caadiga ah, xogtan waxaa loo diraa qoraal toos ah, taas oo micnaheedu yahay in haddii xiriirku ay tahay in lagu xiro dhinac sadexaad, xogta la xaday. SSL waxay taasi ka hortagtaa tan adoo ogolaanaya algoritmi i kriptimit në loo isticmaalo inta lagu jiro isku xirka labada dhinac.
Calaamadaynta, ama calaamada cagaaran ee calaamaduhu waxay noqotey tilmaame balan qaadaya dadka isticmaala in boggooda ay booqdaan ay kuaaan amnigooda si dhab ah.
Asal ahaan su’asha ay tahay në la weydiiyo waa "Ma waxaan u baahan nahay shahaadada SSL".
Nasiib darro, sida hore loo soo sheegey, da’da dijitalka ayaa loola jeedaa in lakala yareeyo lacagta kaashka ah, hackersaalku maanta ayaa sii kordhaya si ay u tagaan macluumaadka shakhsi ahaaneed.
Aqoonsiga tan, bilawga Korrik 2018, Google wuxuu ku calaamadeyn doonaa dhammaan bogagga HTTP caadiga ah ee aan aheyn mid aan amaan ahayn. Tani waa muhiim in la aqoonsado, maxaa yeelay waxay macnaheedu tahay in goobaha loo aqoonsado inay yihiin kuwo aan amaan ahayn Google ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo ganaax raadinta. Wbsaydhadu waxay ku faanaan gaadiidka iyo haddii aadan ka muuqan liiska Google, ka dibna ma heli doontid dyll badan marka la eego taraafikada bogga.
Qiimaha laga bilaabo 36,75 $ / sanad
Qiimaha laga bilaabo $ 8,88 / sanad
Qiimaha laga bilaabo 14,95 $
Qiimaha laga bilaabo 75.15 $ / sanad
Qiimaha laga bilaabo 175 $ / sanad
Qiimaha laga bilaabo 149 $ / sanad
Qiimaha laga bilaabo 59,99 $ / sanad
SSL bilaash ah: Kodi Aynu
Kuwa idinka mes ah oo ku shaqeeya goobaha shakhsi ahaaneed ama hiwaayadaha, ama wax kasta oo aan ganacsi ahayn, waxaa jira adigoon kuu ogolaanaynin in kale oo Google la aqbali karo.
Aan isku dayno wa CA CA aaminsan oo furan oo bilaash ah in la isticmaalo (). Nasiib daro, waxay kaliya bixisaa shahaadooyinka domain-ama shahaadada DNS oo aan qorsheyneynin in ay kordhiso tan OV ama EV. Tani waxay ka dhigan tahay in shahaadooyinkoodu kaliya a ans ansin karaan lahaanshaha iyo ma aha shirkadda heysata. Haddii aad tahay goob ganacsi, taasi waa caqabada ugu weyn.
Aynu Encrypt horay ug quayabaynay shirkadaha martigeliya qaarkood (Tusaale ahan- SiteGround iyo GreenGeeks). Haddii aad qorsheyneyso inaad raacdo Aan Encrypt Free SSL, waxaa ugu wanaagsan inaad martigeliso mid ka mes mes ah martigaliyayaasha websaydhkan.
Kontrolloni HTML HTTPS (iyagoo adeegsanaya Aynu Encrypt at Site Site) xoogaa yar oo gujiyo ah.
Si të keni nevojë për të parë më shumë se a keni filluar të bëni SSL ee SiteShkoni, Gali Cinwaanka> Amniga> Menaxher SSL / TLS> Certifikata (CRT).
Laga bilaabo Maarso 29, 2018, Aynu Hirgelin SSC SSC waxaa sidoo kale ku jira (bilaash) dhammaan xisaabaadka martigelinta ee SiteGround. Tani waxay noqonaysaa ilaaliye waqti loogu talogalay milkiilayaasha goobta ku jira oo ku shaqeynaya nën-domains (mail.domain.com, billing.domain.com, iwm). Wax badan ka baro dib-u-eegga boggaaga.
Nën ‘Options’ fursadaha, guji ‘SSL / TLS Manager’
Nën ‘Instalimi i Menaxhimit të SSL’, dera ‘Maaree Site SSL’
Guji ‘Autofill by Certifikate’
* Xusuusin: Haddii aadan isticmaalin kinwaan IP ahooadad udheeraad ah waa inaad mid ka ka mesa ah menu menu IP-ka.
Tag bogga Websaydhada & Domain-ka dero qaybta dhe jeceshahay inaad ku dhejiso shahaadada.
Marka la eego qaybta ‘Ngarko skedarët e certifikatës’, duke parë “Shfleto” në një listë të shpejtë dhe të kontrolluar CAA ee loo baahan yahay.
Nën ‘Sigurinë’, ju do të bëni më shumë fjalë për haj-hoosaadka dhe derato shahaadada.
Hubso sanduuqa ‘SSL Support’ ee saxda ah.
Hubi inaad riix ‘OK’ si aad u badbaadiso isbeddel
Haddii ead eegto bogagga interneetka ee boggaga internetka waxaad arki doontaa inay dhammaantood isticmaalayaan HTTP. Sida iska cad waxay u baahan yihiin in la cusbooneysiiyo xidhiidhada HTTPS. Hada dhowr tallaabo waxaan ku tusinaynaa hab aad adigu u Sameyso adigoo isticmaalaya farsamo dib u habeyn.
Shënoni dhe ruajti HTTPS haddii dhe ju leedahay shabakadaha bibedda ee kugu xariira waxay kuu tilmaamayaan nooca HTTP. Waxaan samayneynaa dib u jeedin dhowr ah tallaabooyinka, laakiin haddii ay jiraan wax website ah oo dibadda ah oo adad adigu koontarooleyso profil ka dibna waad soo cusbooneysiin kartaa URL si aad u tilmaamto nuqulka HTT.
Përcaktimi i Dejinta 301
Iyadoo 301 shkoi në hagaajineyso waxa dheadynynso waxay u sheegeysaa Google në bogga gaar ah si joogto ah loogu guuray cinwaan kale. Xaaladdan waxaad u sheegeysaa Google in wax kasta o HTTP ah oo ku do të boggagaaga ay hadda yihiin HTTPS sidaa daraadeed waxay Google u direysaa bogagga saxda ah.
Inta badan dadka isticmaala Linux Linux Linux martigelintaan waxaa lagu Sameyn doonaa iyada oo loo marayo faylka .htaccess (eeg code Korea sida ku xusan talooyinka Apache).
Emri i serverit www.example.com Redirect "/" "https://www.example.com/"
Tani dhab ahaantii waa tallaabo ikhtiyaari ah maxaa yeelay maaha qof kasta oo isticmaala CDN. CDN waxay u taagan tahay shabakadda soo gudbinta Macluumaadka oo waa juquraafi Ahaan loo qaybiyey server oo kaydiya nuqulada faylashaada shabakadaada waxayna u soo bandhigi doonaan martidaada Katundi i turpshëm serverka juquraafi Ahaan u Dhow si loo hagaajiyo xawaaraha ay u tahay iyaga.
Tusaale ahaan CDN caa aa wa Cloudflare.
Haddaad u baahato inaad la xiriirto CDN oad aad waydiiso tilmaamaha si aad u cusbooneysiiso SSL-kaaga si a nidaamka CDN u aqunesadaan.
Kur ju lutem bëni një kohë të gjatë për të përdorur një Microsoft Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Iyo Apple Safari waxay ku dhistay bakhaarro loo isticmaalo in lagu aqunesado shahaadooyinka SSL-yada la aaminsan yahay.
Haddii aad hesho farriin sheegaysa in goobta uu leeyahay shahaado aan la aamini karin, jimicsi taxaddar sida tan oo macnaheedu yahay in shahaadada imika aysan saxeexin CA.
Qalabkan badanaa waxaa keena shahaadada SSL-da qaldan ee lagu rakibay. Khaladaadka inta lagu jiro nidaamka rakibida waxay keeni kartaa khaladaadka SSL-ga qaar ka mes ah. Waa inuu jiraa ‘silsiladda kalsoonida’taasoo micnaheedu yahay in dhammaan qaybaha lagama maarmaanka ah ee geeddi-socodka saxiixa ay tahay inay baxaan.
Si aad u gudubto arrimaha SSL, qaar ka mid ah milkiilayaasha bogagga waxay abuuraan Shahaadooyin SSL-kooda. Tani waa suurtogal, laakiin ha Sameynin dylli isbeddel ah tan iyo markii aysan saxeexin CA. Waqti keli ah ee shahaadooyinka is-saxiixa ay u badan tahay in la isticmaalo waa goobo imtixaan ama horumarineed. Meelaha ay ku qoran yihiin shahaadooyinka is-saxiixan looma muujin doono inay yihiin ammaan.
Tani waa dhibaatada qaabaynta. Shahaadooyinka SSL ee shaqeynaya, bog kasta iyo faylka ku yaal boggaaga waa inuu ahaado HTTPS. Tan waxaa ka mes ah ma aha oo kaliya bogagga, laakiin sidoo kale sawirada iyo dokumantiyada. Haddii bogga kaliya uusan aheyn HTTPS, goobta waxay la kulmi doontaa qalad isku dhafan oo dib ugu noqoshada HTTP.
Si të keni hyrë në dhibaatooyinkan, hubi in xiriiradaada dhamaantood la cusbooneysiiyay xidhiidhada HTTPS.
Dhammaadka maalinta, shahaadooyinka SSL waa xaalad guuleysi leh. Haa, waxaa laga yaabaa in lagu qasbo ganacsiyada waaweyn sida Google, laakain waxaa jira runtii aad u yar.
Qiimaha yaryar, waxaad u xaqiijin kartaa macaamiisha ammaanka ee macluumaadka iyo asturnaanta. Macaamiisha dhinaca kale, waxay dib u soo ceshan karaan rumaysiga teknoolajiyada digital-ka ah, oo ah mes si aad ah u cakiran Hackers, Spamers iyo kuwa kale ee loo yaqaan ‘Cyberriminals’.
eCommerce waa mid ka mes ah tiirarka muhiimka ah ee dhaqaalaha dijitalka waxaana uu gacan ka geystey kor u qaadista ganacsiga xudduudaha xuduudaha hadda ka hor. Iyada oo la ilaalinayo xogta ammaan iyo ammaan, mulkiilayaasha boggaga shakhsi ahaaneed ayaa gacan ka geysan kara ammaanka internetka sidoo kale.
Ugu dambeyntii, marka aad dooranayso SSL, isku day inaad iska ilaaliso isha ku hayso isha qiimaha oo aad samayso sida ugu fiican si aad mar walba ugu noqoto hal erey oo fudud marka aad dareemaysid lumis ama wareersan; Aaminto.